Muuri News Network » SAWIRO: Shariif Xasan oo la kulmay Wafdi ka socda DF..(Qorshe Muhiim ah)
SAWIRO: Shariif Xasan oo la kulmay Wafdi ka socda DF..(Qorshe Muhiim ah)
Oct 12, 2015 - Comments off
Wararka naga soo gaaraya Magalaada Baydhabo ee Xaruunta Gobalka Baay ayaa sheegaya in maanta kulan adag uu dhexmaray Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan sheekh aadan & Wafdi ka socda Dowlada Federaalka Soomaaliya iyagoona ka wada hadlay Arimaha ku saabsan isku dhafka Ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed.
Shariif Xasan ayaa soo dhaweeyey dadaalka gudiga, wuxuna xusay in ay kala shaqaynayaan sidii looga miro dhalin lahaa wadatashiyada ku aadan dhismaha ciidamadda ee laga wado Koonfur Galbeed. Isagoona uga mahadceliyey guddiga Isku dhafka shaqada muhiimka ah ee ay wadaan.
Waxaan ka wadatashanay sidii loo heli lahaa ciidan summad qaran leh, maanta dalkeena in badan oo kamid ah waxaa ka taagan duruufo kala duwan oo suurtagal ahayn in ciidan qaran laga sameeyo, laakiin waxaan idiin sheegayaa in Koonfur Galbeed ay diyaar u tahay dhismaha ciidan qaran waana tan manta halkan isagu kaayo keentay” ayuu yiri Madaxweyne Shariif Xasan.
Wasiiru Dawlaha Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya Mudane Maxamed Cali Xagaa ayaa dhinaciisa yiri:
Kulamo badan oo aan horey u qabaneyna waxaan ku muujiney muhimadda ah in ciidanka la isku dhafo, waxaana maanta ina horfadhiya Madaxweynihii Koonfur Galbeed iyo Golihiisa Wasaaradda waxaana dhammaanteen diyaar u nahay sidii howshan ay noogu qabsoomi lahayd. Waana filayaa in si habsami leh hawshu u qabsoomi doonto waqti dhow.